चीन: म चीन र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आफ्नो विद्यार्थी बुझ्न | USAHello | USAHello
चिनियाँ संस्कृति को विद्यार्थीहरूले 'समझ. चीन र शरणार्थी र प्रवासिहरु को विद्यार्थी सिक्न.
तिनीहरू विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो कि विद्यार्थी सिकाउन धेरै शिक्षकहरू अनुसार तिनीहरूले आफ्ना विद्यार्थी बारेमा पर्याप्त जानकारी प्राप्त छैन. तपाईं शरणार्थी विद्यार्थी सिकाउन भने, यो नयाँ आगमन पृष्ठभूमिका परिचित हुन महत्त्वपूर्ण छ. जानकारी तलका विद्यार्थीहरूको अद्वितीय सिक्ने शैलीहरू उपयुक्त छन् कि सांस्कृतिक उत्तरदायी शैक्षिक रणनीति विकास गर्न सकून् भनेर, सबैभन्दा प्रमुख अंक को एक सिंहावलोकन प्रदान गर्न अभिप्रेरित छ.
मानक चिनियाँ वा मन्डारिन (सरकारी) ; देश भर क्यान्टोनिज र धेरै अन्य बोलियों बोल्न छैन.
चीन मा पुरुष र महिला बीच साक्षरता साधारण उच्च दर, चिनियाँ समाजमा शिक्षा महत्त्व देखाउँछ जो. चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति देखि (1966-1976) चीन मा शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न महत्वपूर्ण प्रयासको परिणामस्वरूप, आर्थिक आधुनिकीकरण बलियो महत्त्व विकास हाइलाइट. तपाईं चिनियाँ छोराछोरीलाई शिक्षा महत्त्व सजग छन् याद सक्छ.
तथापि, र देश को आकार राष्ट्रिय अल्पसंख्यकों को स्कोप को, यो अझै पनि छ किनभने शिक्षा देश भर भिन्न र शिक्षा पहुँच सीमित भनेर शहर वा अन्य कारक निकटता भर पर्न सक्छौं.
विशेष गरी चिनियाँ विद्यार्थीहरूलाई चिनियाँ समाज, समयबद्धता, लगनशीलता, आदर, साधारण व्यवहार बारेमा. यसलाई शिक्षक बताइएको गर्दा विराजमान रहन आदर छ. आदर चिनियाँ संस्कृति महत्त्वपूर्ण को सिद्धान्त कक्षाकोठामा प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ.
परिवारको संलग्नता / स्कूल
चिनियाँ मान्छे अभिवादन गर्दा, वृद्ध पूर्वता. यसले हामी अरूलाई सराहना अघि सबैभन्दा ठूलो व्यक्ति सलाम गर्न विनम्र छ भन्ने हो. यो श्री द्वारा चिनियाँ वयस्क सामना गर्न महत्वपूर्ण पनि छ ,सुश्री मिस। आफ्नो परिवारको नाम, तिनीहरूको पहिलो नाम साथै. महिला साधारण विवाह मा आफ्नो नाम कायम. हामी पनि व्यावसायिक शीर्षक मार्फत चिनियाँ मान्छे संग काम गर्दै छन्. उदाहरणका लागि, उपनाम जियांग शीर्षक प्रयोग: राज्यपाल ली वा ली निर्देशक.
चिनियाँ संस्कृति आधिकारिक र तपाईंले यसलाई देखाउन कुरा तरिकाहरू पाउनुहुन्छ. Greeting पुरुष र महिला हात मिलाइ समावेश, र तपाईं परिवार वा घनिष्ठ मित्र संग कुराकानी गर्न जबसम्म कुराकानीमा त्यहाँ सानो स्पर्श वा कुनै सम्पर्क छ. सामान्य मा, चिनियाँ घृणा गर्नुहुन्छ अपरिचित छोएर. तर, चिनियाँ मान्छे सहानुभूति को अभिव्यक्ति को फारम रूपमा शारीरिक Amskk यदि छक्क छैन.
परिवार सम्बन्धहरु सामूहिक संस्कृति कि परिवार राम्ररी चिनियाँ विद्यार्थीहरूको जीवन संलग्न मतलब दस्तावेज. यसबाहेक, वृद्ध आदर मा जोड चिनियाँ विद्यार्थीहरूको आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीको जीवनमा प्रभाव पार्न अर्थ. यो प्रभाव पनि पुरानो भाइ बहिनी र पुरानो साना भाइ बहिनी संग हुन्छ. त्यसैले, जब विद्यार्थीहरू एक समस्या सामना, यो बुद्धिमानी राम्रो अवस्था बुझ्न वा वैकल्पिक समाधान वा विचार मा विकल्प खोज्न परिवारका सदस्यहरूले कुरा हो. तपाईं पुरानो भाइ बहिनी गर्न पहिलो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने चिनियाँ परिवार भित्र परम्परागत परिवार संरचना र एक कठोर वर्गीकरणका छ, त्यसैले प्राकृतिक वर्गीकरणका मार्फत परिवार मा dilution समस्या समस्या जोगिन सक्छ.
चिनियाँ कुराकानी अप्रत्यक्ष हुन सक्छ, र शब्द पछि अन्तरनिहित अर्थ व्याख्या गर्न आवश्यक. कुराकानीमा, कसैले त्यो भनाइको तात्पर्य को विपरीत भन्न सक्छ (सायद गोपनीयता दुरुपयोग वा किनभने प्रावधान जोगिन) तसर्थ, यो ध्यान र साँचो अर्थ बुझ्न प्रश्नहरू सोध्न महत्त्वपूर्ण छ.
यो दृश्य संचार माध्यम भाषण पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ त प्रत्यक्ष आँखा सम्पर्क आदर, अनुशासन र ध्यान, शो. तपाईं बच्चाहरु वा आमाबाबुले कुरा गर्दा, व्यक्तिको टाउको कट आदर अर्को साइन छ.
एक इशारा गर्दा चिनियाँ विद्यार्थीहरू वा चिनियाँ परिवार सामना औँला इशारा एक सन्दर्भ बचा गर्नुपर्छ,. सूचकांक औंला को औंला इशारा पूर्ण सट्टा आफ्नो हात वा समतल XFX प्रयोग. पनि एक व्यक्ति को ध्यान आकर्षित गर्न आफ्नो औंला वा Sfirk टिप्न जोगिन. गैर-आदरणीय को कुनै पनि धारणा बच्न संचार को एक आदरणीय हालतमा प्रयोग.
चिनियाँ साधारण यस्तो चिनियाँ राजनीति वा सांस्कृतिक क्रान्ति को आलोचना रूपमा नीति मा वार्ता, तिरस्कार. सबै भन्दा राम्रो सानो कुरा भद्र सकारात्मक कार्य को.
त्यहाँ समुदाय र एउटा महत्त्वपूर्ण चिनियाँ को जीवन मा, सामूहिक परम्परागत र धार्मिक भन्सार मा जोर को एक महान सम्झौता छ.
चिनियाँ जनसंख्याको बहुमत बौद्ध, कन्फ्यूशियस र टओिस्म को एक समूह अभ्यास. ख्रीष्टियन, Protestantism, क्याथोलिक चर्च, Mormonism, इस्लाम र यहूदी अभ्यास जनसंख्याको एक सानो अल्पसंख्यक. जातीय समूहहरूले मूख्य हान चिनियाँ, जुआंग, Uygur, Hui, यी, तिब्बती, मिअाव, Manchu, मङ्गोलियन, POI सहित अन्य जातीय समूहहरू, को जनसंख्याको सानो अंश, कोरियाली हो.
वर्गीकरणका मामलामा, पुरुष र महिला भूमिकाको र दृष्टिकोण थप, परम्परागत जहाँ चिनियाँ समाज, एक मूख्य पुरुष रहन्छ, तर महिला थप egalitarian समाज भएका छन् किनभने महिला दृश्य विकसित stems. तर, श्रम शक्ति महिला को अनुपात बढ्दै छ हुनत, यो अझै पनि महिला घरेलू जिम्मेवारी बताउने अपेक्षा छ.
पुरुष र महिला औपचारिक लुगा र रूढिवादी, गाढा रंग र प्रकट छैन भनेर लुगा मा लुगा लगाउने गर्छन.
चिनियाँ संस्कृति पुस्तिका
तपाईं आप्रवासी र शरणार्थी विद्यार्थी कसरी समर्थन बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ? शिक्षकहरू लागि व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम सदस्यता लिन.
एक PDF फाइल रूपमा यो जानकारी छाप्न
तपाईं चिनियाँ विद्यार्थीको पृष्ठभूमि डाउनलोड र एक PDF फाइल रूपमा यो परिभाषा छाप्न र यो कक्षा मा एक स्रोत रूपमा राख्न.